IRossetto kunye neCocciolato - igumbi eliphindwe kabini iPesaro - I-Airbnb
IRossetto kunye neCocciolato - igumbi eliphindwe kabini iPesaro
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguEnrico
Indlu yethu ibekwe kumbindi wePesaro, amanyathelo ambalwa ukusuka kwiziko lembali kunye nesikhululo sikaloliwe.
Sibeka kwindawo yakho igumbi elikhulu labucala elinegumbi lokuhlambela, lalungiswa ngo-2020 kwaye lixhotyiswe ngezinto ezininzi ezintle, njengefriji encinci, iketile kunye neti yezityalo, umatshini wekofu, ibalcony ezimeleyo egcwele itafile kunye nezitulo kunye ne-rack yokomisa, iTV. , ezamahala wi-fi.
Nje ukuba uwele indawo yokungena, uya kuzifumana ukwindawo enikezelweyo ukuba ungene, apho uya kufumana iimephu zesixeko kunye nolwazi olunxulumene neziganeko zexesha onalo. Kanye ngomnyango, uya kuba ngqo kwigumbi lakho.
Indawo edlamkileyo elungele wonke umntu, enalo lonke uhlobo lwenkonzo ekhoyo, konke kumanyathelo ambalwa: i-ice cream parlor phantsi kwendlu, iikhemesti ezimbini, i-pizzeria, ivenkile yepastry, icuba, abalungisi beenwele, amaziko obuhle, iivenkile ezinkulu, indawo yokuhlamba iimpahla kunye neevenkile zokuthenga.
Siyavuya ukubamba abantu endlwini yethu kwaye siya kuzama kangangoko ukwenza ukuba uzimele kwaye ukhululekile ekuhambeni kwakho, kodwa siya kufumaneka nasiphi na isicelo okanye ulwazi.